20 inch baaskiil taayirro dufan leh oo iib ah | ebike Shuangye
Bogga ugu weyn Products baaskiil koronto duufaanta korantada ee korantada 20 oo ah dusha sare ee dufanka baabuurta leh ee iibinta baaskiilada A6AH20F
Batariga: Batoonka Liitiyoonka 36V 10Ah Qarsoodi jir
Biriigyada: Discs Front & Rear
Daarooyinka: 20 * 4.0 inch
Naqshada: Aluminium Alloy
Xawaaraha Heerka: 30km / h
20 oo ah dusha sare ee dufan ee baaskiilada loogu talagalay iibinta
Baaskiilka mootada dhererka dhererka dhererkiisu yahay 20 inch ee leh Mashiinka ayaa ugu dambeeya dhammaan gaadiidka dhulka. Si isku mid ah loogu fiicnaado wadada, wadada, xeebta ama barafka. Taayirada waaweyn ee afar-inji ah ayaa ka dhigaya baaskiil raaxo leh oo aad waligaa raaci doonto! Sidoo kale waa wax fudud oo fudud.
20 inji baaskiilka baruurta korontada 4.0 Baaskiilka taayirrada leh Astaamaha suulka si aad si sahal ah ugu fuusho buuraha! Baaskiilka taayirrada dhererkiisu yahay 20 inji waxaa ku jira 36V 10AH lithium-ka ugu fiican ee ku qarsoon jir, masaafo dheer 80KM.
Baaskiilka mootada dhererka dhererkiisu yahay 20 inch wuxuu ku bilaabmayaa qaab adag oo Aluminium ah oo Aluminium ah iyo fargeeto fargeeto ah. Taayiradaas waawayn ee waawaynna way is rogaan ficil ahaan waxkasta. Waxay u egtahay inaad fuushan tahay rooga sixirka. Ku darso waxay umuuqataa mid aad u qabow!
20 inch baaskiil dameer leh baaskiilka Qalabka:
Gawaarida: Offroad 20 * 4.0 inch
Saddle: Saddle raaxo leh
Shirkad: Shirkad fudud
Max Range: 80km kasta
Tags:duufaan dameer leh Baaskiilada dufan ee mootada ah
Ka hor: 20 dijo dufan ah oo dufan korantadiisu tahay A7AM20
Next: Ugu sarreeyaa ayaa lagu qiimeeyay 60v 2000w taayirada dufanka awoodda leh ee A7AT26